Sida loogu isticmaalo WhatsApp Web kaniini Android ah: Talaabo talaabo ah | Androidsis
Sida loogu isticmaalo WhatsApp Web kaniini Android ah
WhatsApp waa codsi muhiim u ah taleefannada Android. In kastoo markii loo isticmaalo kaniiniga, had iyo jeer ma ahayn wax fudud, illaa ugu dambayntii nooc kiniin ah oo ka mid ah ayaa la bilaabay, taas oo sii wadata caqabado badan. Maaddaama aynaan u adeegsan karin koonto isku mid ah taleefoonka labada qalab. Dhibaatada noocan ah, waxaan u adeegsan karnaa WhatsApp Web.
Sida inbadan oo idinka mid ahi horey u ogaayeen, WhatsApp Web waa nooca desktop-ka ee arjiga fariin, oo aan ku galno biraawsarka kumbuyuutarka. Waxay kuxirantahay koontada taleefanka, taas oo noo ogolaaneysa inaan fariimaha dirno markasta adoo adeegsanaya. Waxaan u isticmaali karnaa kiniin sidoo kale.
Nooca dalabkaani wuxuu leeyahay faa iidooyin badan. Waxay noo ogolaaneysaa inaan ku isticmaalno koontadeena marwalba, way fududahay in la isticmaalo iyo marin loo helo xitaa waxay noqon kartaa caawimaad haddii aan rabno ogow haddii qof soo galay akoonkeenna oggolaansho la'aan. Waxaan sidoo kale ku isticmaali karnaa kiniin Android ah, inaad awood u yeelatid inaad laxiriirto asxaabteena dhib la'aan, adoo isticmaalaya isla xisaabta taleefankaaga Android.
1 Sida loogu isticmaalo WhatsApp Web kaniiniyada Android
1.1 Si aad u tixgeliso
Sida loogu isticmaalo WhatsApp Web kaniiniyada Android
Si loo helo shabakadda WhatsApp waa inaan galnaa degelkeeda, oo aad ka heli karto xiriirkan. Waxaan ku galnaa adoo adeegsanaya biraawsarka kiniinka Android. Wax macno ah kuma lahan biraawsarka aad isticmaasho, maaddaama dhammaantood ay ku habboon yihiin barnaamijka. In kasta oo dareenkan, Google Chrome uu yahay mid raaxo leh, maxaa yeelay waa inaan ku dhaqaaqnaa xeelad yar oo arrintan la xiriirta.
Markii aan ku jirno websaydhka kiniinka waxaan arki doonnaa inaan helno bog guri. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan gujino saddexda qodob ee toosan ee ku yaal midigta shaashadda, laga soo bilaabo menu-ka Google Chrome Liiska macnaha guud ee ku imanaya xulashooyinka, waa inaan gujino nooca kumbuyuutarka. Sidan oo kale, ayaa lagu yidhi websaydhka ayaa loo soo bandhigi doonaa sidii oo aan ka soo booqanaynay kumbuyuutarka ka dibna kiniinka Android wuxuu noqonayaa sidii inuu yahay PC, oo noo oggolaanaya inaan marin u helno.
Waxa caadiga ah waa in webka si otomaatig ah loo cusbooneysiiyo, haddii kale gacan kuma qabanno. Markaad sidan samaynayso, nambarka QR ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda, oo ah inaan ku baarno casrigayaga casriga ah. Taleefanka waxaan ka furannaa WhatsApp oo gujineynaa menu-ka sare, halkaas oo aan ku dooranno xulashada Websaydhka WhatsApp. Waxaan markaa la weydiin doonaa inaan iskaanno lambarkan su'aasha ah. Waan sameynaa waana sugeynaa in la aqoonsado. Dhowr ilbiriqsiyo ka dib, sheekaysiga aan ku hayno barnaamijka waxaa lagu soo bandhigi doonaa kiniinka, biraawsarka. Waxaan hadda bilaabi karnaa adeegsiga si caadi ah.
Si aad u tixgeliso
Haddii aad isticmaashay WhatsApp Web munaasabad kasta oo hore, markaa kuuma soo bandhigi doonto wax kadis ah. Haddii kale, way fiicantahay in taa la ogaado waa inaad ku haysaa taleefankaaga qadka internetka markasta, si wada hadalada loo waafajiyo. Haddii kale suurtagal noqon mayso in nooca nuqulkan ah loo isticmaalo kiniinkaaga Android. Waxay kuxirantahay markasta taleefanka tan.
si dhammaan fariimaha aad ka soo dirto kiniinka dareenkan, sidoo kale waxaa lagu soo bandhigi doonaa taleefanka. Had iyo jeer waa la cusbooneysiiyaa wax walbana waa la isku hayaa. Waxa kale oo aad ka heli kartaa faylasha la soo diray, sida sawirrada ama fiidyowyada, labada qalab. Marka waxaad wadahadalka ku sii hayn kartaa kiniin ama taleefan Android ah markasta oo aad rabto.
Isticmaalka WhatsApp Web ee kiniiniga Android ah waa mid aad u fudud qaabkan, sida aad u aragto, kuma qaadaneyso waqti aad u dheer in la iswaafajiyo xisaabaadka oo lagu raaxeysto qaabkan websaydhka ah ee caanka ah. Waa nooc in badan oo kafiican in la isticmaalo, gaar ahaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu nooca caadiga ah ee kiniinku soo bandhigo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loogu isticmaalo WhatsApp Web kaniini Android ah
Honor V30 wuxuu isticmaali doonaa Kirin 990 wuxuuna yeelan doonaa isku xirnaanta 5G
Xiaomi hadda waxay soosaaraysaa 40-watt tikniyoolajiyad lacag la'aan ah oo wireless ah